रोजगारीका लागि विदेशिन लागेका मतदाता भन्छन्ः “चुनाव पर्खे, जागिर छुट्छ” | NepaleKhabar.com
रोजगारीका लागि विदेशिन लागेका मतदाता भन्छन्ः “चुनाव पर्खे, जागिर छुट्छ”
भीमदत्तनगर,, कात्तिक १४ गते । मलिन अनुहार, शिरमा ढाकाको टोपी, निधारमा बिदाइको सेतो अच्छेता र हातमा कालो रंगको झोलासहित भारतको गड्वाललाई मजदुरीको अन्तिम यात्रा साँधेर सोमबार गड्डाचौकी नाकामा ४८ वर्षीय सर्पे बूढा भेटिनुभयो ।
सीमावर्ती भारतीय बजार वनबासासम्मको पैदल यात्रापछि बस चढ्ने भन्दै गड्डाचौकी नाका भएर भारतको गड्वाल रोजगारीका लागि गइरहेका कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँपालिका–२ का बुढाले आसन्न निर्वाचनमा मतदान गर्ने चाहना हुँदा पनि रोजगारीको बाध्यताले आफू विदेशिन बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो ।
विगत डेढ दशकदेखि भारतको गड्वाल क्षेत्रमा मजदुरी गरेर परिवारको खर्च धान्दै आउनुभएका बुढाले आफू दशैँ मनाउन एक महिनाका लागि बिदामा घर आएको बताउनुभयो । बूढाजस्तै दैनिक सयौँ मताधिकार भएका नेपाली निर्वाचनको परबाह नगरी गड्डाचौकी नाकाभएर भारततर्फ गइरहेका छन् ।
“छोटो समयको बिदा छ, ढिलो गरी रोजगारीमा गएपछि साहुले फिर्ता पठाइदिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो– “मतदान गर्न मन भएर के गर्नु ?”
मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति दुई धु्रवमा विभाजित भएर आसन्न मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी माहोल तातिरहेका बेला आर्थिक अवस्थाले ग्रसित मतदाता रोजगारीका लागि विदेशिनु बाध्यता भएको बताउँछन् ।
“एक महिनाको बिदा लिएर दशैँ मनाउन आएको थिएँ,” बुढाले रासससित भन्नुभयो– “मंसिरको चुनावका लागि यता फर्के, उता जागिर नै रहन्न ।” यसअघिका निर्वाचनसम्म आफूले मताधिकार प्रयोग गरेको बताउँदै उहाँले आसन्न निर्वाचनमा भने आफ्ना परिवारले मतदान गर्ने बताउनुभयो ।
“घरमा गाउँको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने नेतालाई मात्रै मतदान गर्नु भनेर सल्लाह दिएको छु,” बुढाले भन्नुभयो– “यतिका चुनावमा मतदान गर्दा केही उन्नति भएजसो लागेन ।” उहाँले मुलुकमा नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि बेरोजगार युवाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो ।
“चुनाव जित्ने नेताका व्यवस्था फेरिए होलान, हाम्रो त अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ,” बुढाले गुनासो पोख्नुभयो ।
उहाँसँगै मजदुरीका लागि भारत जान लागेका बेल्डाँडी नगरपालिकाको वैवाहका २६ वर्षीय हस्त बूढाले रोजगारको समस्या भएकाले आफू चुनावको मुखमा विदेशिनु परेको बताउनुभयो । “भोट दिएर पेट पाल्न सकिएला र ? ।” उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– “देशभित्र रोजगारी नभएसम्म हाम्रा लागि चुनावको कुनै वास्ता रहेन ।” दशैँ तिहार मनाउँदै धानखेतीसमेत भित्र्याएर भारत जान लागेका बूढाले पैसा कमाएर घरपरिवारको लालनपालनमा खर्च गर्ने योजना सुनाउनुभयो ।
त्यसैगरी रोजगारीका लागि भारतको बैंग्लोर जान हिँडेका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ का २० वर्षीय जीवन देवरले पनि चुनावलाई वास्ता नगरी आफू विदेशिनु बाध्यता रहेको सुनाउनुभयो । “के हामीलाई चुनावमा भोट हालेर राम्रो नेता छान्ने रहर हँुदैन र ? उहाँले भन्नुभयो– “मुलुकभित्र रोजगार नभएसम्म म जस्ता हजारौँ युवाले अझै कहिलेसम्म विदेशिनु पर्ने हो, थाहा छैन ।” बैंग्लोरमा विगत दुई वर्षदेखि होटलमा खाना पकाउँदै आएका उहाँले आफ्नो कमाइले घरपरिवार धानिएको बताउनुभयो ।
“भाइ÷बहिनीलाई पढाइ खर्च जुटाउनै पनि घर छाड्नुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो । आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले अध्ययन गर्न नपाउँदै आफू रोजगारीका लागि भारत जानुपरेको देवरको भनाइ छ ।
त्यसैगरी गड्डाचौकी नाका भएर रोजगारीका लागि भारतको अहदावाद जान लागेका शुक्लाफाँटा नगरपालिकाकै ३० वर्षीय मदन भण्डारीले पनि विदेशिनुको बाध्यता सनाउनुभयो । “देशमा विदेशि लगानी भित्र्याएर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न नेताहरुको ध्यान जाओस्,” उहाँले भन्नुभयो– “हामीले भारतमा सिकेको सीप समेत स्वदेश आएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने ठाउँ छैन ।” भारतको रोजगारीले आर्थिक लाभसँगै ज्ञान पनि बटुल्ने अवसर मिलेको उहाँको भनाइ थियो ।
गड्डाचौकी सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी निर्वाचनका बेला दैनिक सयौँ नेपाली भारत रोजगारीका लागि जाने गरेका बताउँछन् । “निर्वाचनका बेला त विदेशिनु नपर्ने हो,” गड्डचौकीमा खटिएका एक प्रहरीले भन्नुभयो– “अरु बेलाभन्दा त चुनाव भएरै होला भारत जानेको संख्यामा कमी त आएकै छ ।”
नागरिक समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष भवराज रेग्मीले निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान भएकाले मतदाता भएका सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हो,” अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– “सरकारले वातावरण बनाइदिने हो ।” मतदान गर्न पाउने अन्य विकल्पका विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख केशवसिंह भण्डारीले निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । “मतदान सदुपयोग गराउन जिल्लामा पनि विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौँ,” भण्डारीले भन्नुभयो ।